Indlela ukukhetha pool izinsana Petersburg? Izithombe kanye nokubuyekeza
Namuhla, abazali ezincane zivame ukuthuthukiswa egcwele izingane zabo, futhi abaningi babo bacabanga ngayo ngokoqobo kusukela ezalwa. Futhi into yokuqala kufanele sinake - lena impilo.
Thuthukisa amasosha omzimba imvuthu ngokusebenzisa ukwelashwa amanzi. Sizokubonisa indlela ukukhetha pool izinsana Petersburg, kanye ukuchaza ngobuhle nangobubi bawo yokuqeqesha okunjalo.
Uma sincike umbono wezazi, ekuqaleni grudnichkovoe ebhukuda kangcono ngokushesha ngangokunokwenzeka. Ngo izinsana baye ukuphefumula reflex ukubambezeleka okwenzeka lapho umswakama ebusweni. Ngokuhamba kwesikhathi, ikhono eliyingqayizivele fade, kodwa nje akwenzeki nge ukusebenzisa avamile.
Isikhathi esihle - emva ukuphulukiswa isilonda enkabeni. Ngeshwa, abantwana, aphenduka ngejubane elingafani le nqubo ithatha indawo, ngakho ukunika i usuku oluqondile ukuqala lapho echibini lokubhukuda for izinsana Petersburg, akunakwenzeka.
Izinzuzo amanzi ukwelashwa
Ngokuqinisekile, izinqubo grudnichkovogo Ukuqondiswa kwemikhumbi, zikhona izinzuzo eziningi.
Ukuqinisa izivikeli mzimba.
Ukuphumula isimiso sezinzwa. Ngezinye izikhathi hyperexcitability wezinzwa uncoma ngokuhlanganisa pool nge eziphumulele massage course. Le nhlanganisela siya ulale kahle, nakhu futhi normalizes imisipha ithoni.
Ukuxhumana nezinye izingane.
Amazing echibini ikhombisa izingane hip dysplasia.
Kungasekho nokwesaba amanzi.
Kuthuthukisa kwemizwelo. Abazali abaningi ukubika ukuthi izinsana "ababhukudi" ngaphansi ezingezwakali.
Ngo grudnichkovogo ukubhukuda has Izimo yayo, ngakho-ke ngaphambi ukuthenga ukuthenga qiniseka ukuxoxa ngale nkinga wabantwana.
Ukuqeqeshwa uyonika ubumnandi izinyane nabazali bakhe kuphela endabeni ukukhetha efanele indawo ukuzijayeza Umqeqeshi oqeqeshiwe. A indima ebalulekile eyadlalwa uhlelo umshini ohlanza amanzi.
isikhumba Wezingane Liyindawo ebucayi, futhi "umhlangano" nge-bleach akunakwenzeka ngoba wakhe. Isikhathi esining impela ezinsaneni livela ukusabela iguliswa, lapho sikhetha ungakhohlwa ukuba banake lokhu isici. Ngaphezu chlorination, amanzi kungabuye bahlanza by ultrasound, ionization, i-ozone noma umoya-mpilo asebenzayo.
Pool izinsana Petersburg uzothola cishe kuwo wonke endaweni ngaphandle nobunzima. Kungenzeka matasa emitholampilo zezingane noma amakilabhu yesimanje. Esinye sezipho ezinhle kakhulu ubhekwa maphakathi emkhayeni "owodwa."
Pool ezincane Primorsky esifundeni (Petersburg) sise "Fresh Ukufaneleka". It inikeza ababhukudi abancane:
- Banzi amakamelo sigqoka futhi izihlambi ngesitulo okusezingeni eliphezulu, playpen namathebula ekushintsheni;
- pool 6x12 amamitha, 75 ukuze 110 cm ukujula;
- Turkish umusi ikamelo kanye sauna Finnish.
lokushisa emoyeni imayelana 28 degrees, izinga lokushisa kwamanzi - degrees 32. Ngaphezu kwalokho, lo club zezempilo has ikhefi futhi igumbi yezingane.
Noma ubani angakwazi ukuthenga ski sihamba 1, 3, 6 noma ezingu-9 kanye ngonyaka. Ngokwesibonelo, ngenyanga ukuvakashelwa (amaseshini 1 isikhathi ngesonto) izobiza ruble 5000. esisodwa - ruble 2000. Imininingwane Qedela mayelana nokukhokhwa kuboniswa maphakathi website esemthethweni "eyodwa."
Okuvelayo Pleasant ukuhlala nabazali babo ngemva kokuvakashela "Fresh Ukufaneleka". Ngakho, izivakashi uthi:
- ukulungisa fresh;
- ubumsulwa ababhemayo;
- evikelekile umshini ohlanza amanzi ohlelweni (filtration multilayer, hydrochloride, ozonization nasekukhanyeni oku-ultraviolet);
- ichibi kuphela izingane.
Isimo esikhululekile, i Umqeqeshi asebenzayo futhi uhlelo British Birthlight ukujabulela hhayi kuphela omama, kodwa futhi izingane.
Centre "One piece" futhi umema amakilasi emtholampilo №71, lapho kukhona omunye pool izinsana Petersburg (the Vyborg wesifunda, ul. Akademik Baykova, 27).
Kuvele phansi enalokho kuthambekela, ukuhlanzwa uhlelo yesimanje, izinga lokushisa kwamanzi kuyinto ukhululekile, elula futhi ivulekile sauna izinyathelo emnyango - naphezu indawo somphakathi, i-swimming pool ifakwe kahle. Ngokusho omama abaningi, ukunakekela okukhethekile hola yi abaqeqeshi.
Inzuzo enkulu ukuqeqeshwa emtholampilo izindleko yeningi. Yokubhaliselwe 10 amaseshini abiza ruble 5500, wesikhathi esisodwa ukuvakashelwa - ruble 800. Nokho, imithetho zithé eqinile. Ngokwesibonelo, lapho ukuthenga ukubhaliswa fixed ngosuku yakho ethile, futhi uvakashele ngezinye izinsuku, noma-isikhathi esisodwa kungenzeka kuphela ukutholakala iqembu (esibekiwe kusengaphambili). Mayelana emsebenzini futhi kubikwe ofundisayo.
Uhlelo Water inikeza i-swimming pool ukuze izinsana Petersburg (wesifunda eMoscow) Obukhov yezemidlalo. pool nemingcele: 80 cm, ubude 10 m ukujula.
Amakilasi avunyelwe izingane ezingu-6. Ngo kwekilasi kukhona ekushintsheni amatafula kanye playpen. Trainings aphethwe ngaphansi kokuqondisa ngomfundisi ngamathoyizi ezithakazelisayo futhi ukubhukuda nezinto ezidingekayo.
sifundo Single echibini Obukhov yezemidlalo kuwufanele ruble 400, kanye ukuthenga nesizotha kakhulu inyanga eyodwa (4 amakilasi) izobiza ruble 1200.
Omama abaningi bathanda ukuthi amachibi etholakala esakhiweni ehlukile. Ivulekile eydijithali amakamelo okushisa ukhululekile futhi izihlambi benombono omuhle. Umqeqeshi kuchaza ngokuningiliziwe ukuthi baziphathe kanjani kanye nokulungiswa kwamaphutha. Ngemva kwesifundo, awukwazi ezisheshayo: ukondla ingane aphuze itiye cafe.
Ngoba bonke labo abafisa ukuvula pool izinsana Petersburg ekhelini: ul. Galstyan, 3. "Oceanium" - iqembu labasubathi wonke umndeni, lapho amakilasi imvuthu usungaqala ngemva kwezinyanga ezingu-6.
Amanzi abasubathi omncane engenathi okwengeziwe ukuhlanzwa ne oku-ultraviolet. Ngaphezu ukuqeqeshwa, "Umama nengane" echibini, club oluyohlala inombolo enkulu imisebenzi othuthukisako esimangalisayo nesifundisayo for nezingane zabo bonke ubudala.
Ngokusho ngempendulo izivakashi, pool yezingane eziningi amathoyizi, ukujula ephephile futhi lokushisa ukhululekile. Amanothi eziphathelene nabasebenzi, kuhlanganise nezisebenzi coaching, abangamalungu amakhasimende kunalokho ngabandayo kuka enobungane. zezingane ukuqina izindleko - mayelana 16 000 ruble izinyanga ezintathu.
Pool izinsana (Petersburg, Kalinin wesifunda) inikeza nokuvuselelwa isikhungo "Biofeedback". imishini yobuchwepheshe kuphakamisa akukho ukuphikisa:
- ukwelashwa amanzi usebenzisa isihlabathi izihlungi, magciwane ne ultraviolet, chlorination futhi ozonation;
- emoyeni massage;
- heater kagesi.
Iqembu kumiswa izingane eziyisithupha kuze kufike abazali babo, okwakuhilela umfundisi ezimbili okhokhelwayo. Ukuqeqeshwa ababhukudi abancane ihlala imizuzu engu-30. Amakamelo eydijithali izihlambi eyanele, kukhona ekushintsheni amatafula namabhentshi.
Izivakashi kuphawuliwe nokuhlanzeka wechibi kanye nakwezinye izindawo. Umfundisi ekutshela ukuthi baziphathe kanjani phakathi nesifundo kanye ekupheleni zonke izingane edlala "Bubbles" - hydromassage. I isiqondiso maphakathi "Biofeedback" angakhipha wezingane kwelinye imitholampilo ye Kalinin wesifunda. Kulokhu ukuqeqeshwa senyanga eyodwa kuyoba khulula.
Early ngomkhumbi abalandeli khona "i-Atlantic" - ichibi izinsana (Petersburg, Frunzensky District). Lapha, njengasezulwini "nxenye" maphakathi ukuthuthukiswa, amakilasi aphethwe Birthlight indlela.
Izingane ukuthuthukisa amakhono yokuziphatha benokuqiniseka amanzi futhi ufunde indlela ukucwila emanzini ngokuphelele, kodwa into ebaluleke kakhulu - uthole ukuqeqeshwa kusukela injabulo enjalo. Zonke umsebenzi ofundisa ubonisa unodoli ekhethekile. OKUFUNDA abasubathi omncane engenathi ihlala 45 amaminithi: imizuzu engu-30 nomqeqeshi futhi imizuzu engu-15 - khulula-ukubhukuda.
Kuyaphawuleka ukuthi labo abafisa ukusebenzisa pool izinsana Petersburg kakhulu. Amakilasi aphethwe ezindaweni eziningana, kodwa, nahlulele by ukubuyekezwa, iyona engcono kunazo igatsha yako Frunze lesifunda (Str. Bucharest).
Yokubhaliselwe ngenyanga (4 amakilasi) izobiza ruble 4000, kungenzeka ukuba "ukumisa imigqa" isonto elilodwa. Uma wenza isikhokhelo se-kid Siyaqiniseka indawo eqenjini elithile. One-time ukuvakashelwa - ruble 1200.
Pool "Petrel" (Kazan): incazelo, ikheli, intengo
Regatta - Iyini?
Sukuma surfing gwedla: igama, umlando kanye namaqiniso ezithakazelisayo
Shavarsh Karapetyan - indoda legend. Feat umbhukudi Shavarsh Karapetyan
Ukubhukuda, Yuliya Efimova: Biography iLungu Olympics eRio
Amafomu Basic nezindlela yokufundisa
Nomthandazo olunikeza ukuphila Cross leNkosi eduze
Actress British Amanda Holden: Filmography kanye biography
Isitayela - kuyinto isusstvo
Idonsa umhlane ophansi nesisu esezansi: izimbangela, ukwelashwa. Ukudweba ubuhlungu obuhlungu esiswini
Luphi lona ukholo yabaJuda na? Inkolo Jewish
Shea ibhotela izinwele nomzimba
Iziketi zesikole zamantombazane: ukukhetha okuhle
A imodeli yimpumelelo Dafna Self, lapho yobudala akuyona umsebenzi isithiyo